शरीरले कसरी काम गर्छ ?
आफ्नै शरिरको विषयमा हामीलाई १००% ३ प्रतिशत पनि राम्रोसँग जानकारी गर्न नसकी नै कयौ वर्ष व्यतित गरेको शरीरबाट विदा हुन्छौ । आफ्नै शरीर कस्तो थियो त ? के ले, कसरी बाच्यौं ? कसरी रोग लाग्यो ? कसरी मर्यौ ? स्वास्थ्य कर्मी (स्वास्थ्य सेवक डाक्टर) बोहक अरु मानिस जति पढेलेखेको बुद्धिजीवी (विज्ञ) भए पनि हामीहरुलाई शरीरको विषयमा राम्रो सँग जानकारी नै नभई हामी आफ्नो शरीरबाट विदा हुन्छौं ।
कारण, हामीलाई स्वास्थ्यको विषयमा जानकारी दिने कमजोर पक्ष हो । जव शरीरमा रोग लागी सक्छ र दुख्छ । अनी डाक्टर कहाँ जाने चालन हामीमा प्राय विकसीत हुदै आएको छ।
बैज्ञानिक यूगमा हाम्रो शरीर त हतारमा गरेको खेती जस्तै हो । (न फल राम्रो सँग लाग्छ न हेर्दा राम्रो नै देखीन्छ । जसले पढे बुझेर शरीरको विषयमा राम्रो सँग जानकारी पाउँछ ।
(डाक्टर) उँहाहरुले, सर्वसाधारण सामु, शरीरको विषयमा सवै जानकारी पुर्‍याउने पहुँच पनि हुदैन र फुर्सद पनि हुदैन । जसकारण स्वास्थ्यको गीर्दाे स्थिती दल दलमा फस्तै जान्छ ।
आउने जाने बाटो जस्तै, शरीर संचालनको एउटा नियम हुन्छ । खाने, पिउने वातावरणका खरावीका कारणबाट उब्जीने विकारले शरीरमा प्रवेश गर्दछ । शरीरमा अभूतपूर्ण तत्वहरु हुन्छ । हाम्रो शरीर संचालनलाई आवश्यक सवै तत्व हाम्रै शरीरमा छन् । समय अनुसार हामै्र शरीरले आपैm काम गर्छ । शरीर एक किसीमको प्राकृतिक मेसीन हो । (प्रकृतिले बनाएको) यो मेसीनका सवै पाटपूर्जाले राम्रो सँग काम गरेर जीवन धान्न सक्छ । जव सम्म प्राकृतिक श्रोत शरीरबाट नष्ट हुदैन ।
यदि हामीले उपभोगका साधन, बातावरण खानापिना, कपडा लगाएत, सहि (स्वास्थ्यका लागि हानी नहुने) साधान मात्र जीवनमा प्रयोगमा ल्याउन सक्यौं भने, धेरै प्रतिशत शरीरलाई स्वस्थतामा राख्न सकीन्छ ।
शरीरमा एक किसिमको चुम्वकीय प्राकृतिक उर्जा हुन्छ । हामी वरिपरि राम्रो नराम्रो जस्तो जस्तो हावा पानी, वातावरण खानपिना हुन्छ । त्यस्तै– त्यस्तै शरीरले शरीर भीत्र तानिन्छ । त्यसको परिणाम कति असल वा खराव शक्तिशाली तत्व छ त्यति नै छिटो ढिलो र शरिर अनुरुप शरिरले प्रतिक्रिया देखाउन थाल्छ ।
राम्रो वातावरणमा रहन सक्यौ भने स्वास्थ्य राम्रो अवश्य हुन्छ । नराम्रो (विकार युक्त उर्जा) मन्द विषयूक्त वातावरणले स्वास्थ्यमा नराम्रो असर देखीनुको कारण रोग निम्तीनु हो ।
मिठो खाने राम्रो लाउने भन्दा पनि जति पनि स्वास्थ्य सम्वन्धी सुचना मार्फत हामी स्वास्थ्य सम्वन्धी जानकारी पाउँछौ । हामी त्यो मान्न तैयार हुदैनौं, वास्ता गर्दैनौ । यो भनेको हामीमा स्वास्थ्यको विषयमा जन–चेतनाको कमी हो । पत्ता लागी सकेका कुराहरु कुनै पनि गलत हुदैनन् । यी कुराहरु नियमीत भै रहेका हुन्छन् र असर गरी रहेका हुन्छन् । सु–सुचीत कुराहरुलाई व्यवहारमा ल्याई जिवनयापन गरे, हाम्रो शरीरले आफै शरीर भित्र जन्मने अनावश्यक तत्व (शरीर भित्रको खराव तत्व) शरीर बाहिर पुर्‍याउन सक्छ । जन्मीएको शरीर भीत्रको खराब तत्व सँग टक्कर गर्ने अन्तर शक्ति नै नाश हुँदैन र रोग सँग लडेर जित्न सकिन्छ । शरीरको प्रकृतिक शक्ति (श्रोत) नष्ट भएमा औषधि–उपचार तथा अप्रेशनले पनि कुनै काम गर्न सक्दैन ।